ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပိုက်လိုင်းဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ဆန္ဒပြ
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်အထိ သွယ်တန်းမယ့် ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ဝ ခန့်က ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်မှုကြောင့် ဒေသခံတွေရဲ့ တံငါလုပ်ငန်း ထိခိုက်ခံရမှု၊ လယ်မြေသိမ်းခံရမှုတွေအပြင် ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ တည်ဆောက်ခဲ့တာကြောင့် စီမံကိန်းကို ချက်ချင်း ရပ်တန့်ပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို ခေါင်းဆောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ ပြည်ပရောက် ရခိုင်အလုပ်သမားများအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖိုးလှ က အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ဆန္ဒပြတာက ဗမာပြည်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်း ရခိုင်ပြည်နယ် ကနေပြီးတော့ ရွှေဂတ်စ်ကို ရခိုင်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်၊ ၇၇ဝ ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ ပိုက်လိုင်းနဲ့ ကျနော်တို့ပြည်က ဖြတ်ပြီးတော့ သူတို့ကယူမယ်၊ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေကို လုံးဝသုံးခွင့်မပေးဘူး၊ အဲဒါကြောင့် သုံးခွင့်ပေးဖို့ရယ်၊ နောက်ဒီပိုက်လိုင်း ဖြတ်သွားတဲ့ လမ်းခရီးတလျှောက်မှာ သဘာဝသစ်တောတွေ ပျက်စီးတာတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ မြေတွေသိမ်းတာတွေ၊ နောက်ရွှေဂတ်စ် ပိုက်လိုင်းရှိတဲ့ ရေနက်ပိုက်လိုင်း ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ အဲဒီဧရိယာကို မဖြတ်သန်းရဆိုပြီး သတ်မှတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီနေရာမှာနေတဲ့ ရမ်းဗြဲကျွန်းက ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ ငါးလုပ်ငန်း၊ တံငါလုပ်ငန်းအလုပ်က လုံးဝပျက်စီးလုနီးပါး ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ကာ ကျနော်တို့က ဒီမှာတောင်းဆိုပါတယ်”
မြန်မာပြည်တွင်း ကီလိုမီတာ ၇၇ဝ ကျော်ရှည်လျားတဲ့ အဆိုပါပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအပြင် ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ လက်ငုပ်လက်ရင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါ ပျက်စီးလုနီးပါး ဖြစ်ကုန်တာကြောင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေကို တရုတ်သံရုံး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက ဆန္ဒမပြဖို့ မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဦးဖိုးလှ က RFA ကို ပြောပြပါတယ်။
“လုံခြုံရေးအခြေအနေက သူတို့က အတင်းပဲ နှင်ထုတ်တယ်ဗျ၊ ထောက်လှမ်းရေး ဘက်ပေါင်းစုံတွေ ပါတာပေါ့ဗျာနော်၊ Security Concern ပေါ့၊ စုပေါင်းအဖွဲ့တွေက ကျနော်တို့နောက်မှာ ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်နေပြီးတော့ သူတို့က ဖမ်းမယ့်ဆီးမယ့် ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျား ပြောနေတဲ့ဟာတွေကို ပိတ်ပါတော့ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်ဗျ။ သူတို့ကလေ၊ ဒါပေမဲ့ အတင်းပဲ ကျနော်တို့ ပြီးအောင်တော့ ပြခွင့်ရတယ်၊ ဒီရွှေဂတ်စ်ကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် တောင်းဆိုခွင့် ရှိပါတယ်”
ဆန္ဒပြသူတွေက တောင်းဆိုချက် ၇ ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းအတွက် စစ်တပ်ချထားတဲ့ နေရာတချို့မှာ မုဒိန်းမှုကဲ့သို့သော မှုခင်းတွေဖြစ်နေတာကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့၊ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ လယ်မြေတွေကို တရားဝင်ပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့၊ ဒေသခံတံငါသည်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့လုပ်ကွက်နဲ့ လမ်းတွေကို ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့၊ ဒေသခံတွေ အဓိကအားထားရတဲ့ ငါးလုပ်ကွက်တွေကို အစိုးရက သိမ်းယူပြီး လေလံတင် ရောင်းစားတာတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒမပါဘဲ ဆက်မလုပ်ဖို့ စတဲ့အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Only Rakhine people lost. Myanmar government never was fair.
Feb 13, 2013 01:04 PM
State's Patriot of Burma
Everybody has their own rights. Be fair for your writing.
အလုပ်မရှိ အားတိုင်း ဆန်ဒ ပြမနေနဲ့။ တိုင်းပြည်တိုင်း မှာ ဖွင့်ဖြိုးရေးဆိုတာ လုပ်ရတယ် နည်းမှန်လမ်းမှန် ဆိုရင် မကန်ကွက်နဲ့ ... မမှန်ရင်သာ ကန့် ကွက်ကြ
Feb 12, 2013 09:39 AM
These people should stop protest and better work for development. No need to be fishermen in your whole life. You can upgrade to owningafactory if country develop. Discrimination also will send you to more poverty. Think of LIVE AND LET LIVE all the time .
Feb 11, 2013 08:41 PM
If people achieve true democracy and federal system, local people will have regional authorities (such as city councils' power,state congress' power)
Anti-China movement will go nowhere and the best achievement would be another country(Bangladesh,India,or etc) take over China position.
Feb 11, 2013 01:55 PM